SARS-CoV-2 Antibody Test Strip-SARS-CoV-2 Alaabada Tijaabada-Sinocare
SARS-CoV-2 Xarigga Tijaabada Qofka
Sinocare SARS-CoV-2 Antibody Test Strip waa xirmo tijaabo ah oo fudud oo fudud oo fudud oo fudud oo IgM-IgG ah, iyadoo la adeegsanayo tallaalka dambe ee socodka, oo si tayo leh u ogaan kara IgM iyo IgG difaacayaasha isla mar ahaantaana ka hortagaya fayraska SARS-CoV-2 dhiigga aadanaha 15-20 daqiiqo gudahood.
(CE ayaa la calaamadeeyay, FDA ayaa dhowaan imanaysa!)
Muddada cudurku kudhacayo Virus-ka wuxuu kudhicidoonaa 0-10 maalmood ， IgM waxaa lagu ogaan karaa 7 maalmood kadib bilawga ， IgG wuxuu muuqan doonaa 10 maalmood kadib bilawga.
1. Li Ping, Li Zhiyong, Daraasad horudhac ah oo ku saabsan serum 2019-nCoV IgM iyo IgG oo ka hortaga baaritaanka Novel Coronavirus Pneumonia, Cite as Chin J Lab Med, 2020,43, DOI: 10.3760 / cma.j.cn114452-20200302- 00155
2. Xu Wanzhou, Li Juan, Qiimaha ogaanshaha ogaanshaha wada jirka ee dhiiga IgMand IgG ee difaaca jirka ilaa 2019-nCoV ee cudurka 2019-nCoV, Cite sida Chin J Lab Med, 2020,43, DOI: 10.3760 / cma.j.cn114452- 20200223-00109
Degdeg ah ogaanshaha & Simple hawlgalka
Fayraska cusub, ee hadda loo yaqaan SARS-CoV-2 (oo sidoo kale loo yaqaan virus), fayraska RNA ee qoyska beta coronavirus. IgM-IgG iskudhafka antibody wuxuu kuhaboon yahay baaritaanka degdega ah iyo baaritaanka xaddiga badan ee bukaanka looga shakisan yahay iyo xambaarayaasha astaamaha si looga hortago gudbinta labaad loona hubiyo daaweynta waqtigeeda ee infekshannada.
Imtixaanka Nucleic Acid RT-PCR
Imtixaanka Qofka ee IgG-IgM
Dhiigga oo dhan / Serum / Plasma
In ka badan 2-3 saacadood
15-20 daqiiqo gudahood
Qalab gaar ah ayaa loo baahan yahay
U nugul been diidmo
Imtixaanka IgM-IgG oo ka sarreeya 90%
Gaadiidka / Kaydinta
Waxay ubaahantahay silsilad-qabow
sax ah natiijooyinka
1. Qiimeynta Caafimaadka
Wadarta imtixaanka maadooyinka 320, waxaa ku jira 240 bukaan oo laga reebay, 60 bukaan la xaqiijiyay iyo 20 bukaan ah oo la daaweeyay.
Nooc muunad ah
oo xasaasi ah
Heerka isku dheelitirka xun ee tixraaca (- / -)
Heer macquul ah oo tixraac sax ah(+ / +)
Faa'iido leh nidaamka & Vwaa mid natiijada
1. Waa maxay SARS-CoV-2 & virus?
Fayraska cusub, ee hadda loo yaqaan SARS-CoV-2, waa fayras RNA ah oo ka mid ah nooca loo yaqaan 'co novel' coronavirus, oo mas'uul ka ah masiibada adduunka hadda ka jirta. SARS-CoV-2 wuxuu sababa cudurka loogu magac daray virus.
2. Waa maxay silsiladda tijaabada ee Sinocare SARS-CoV-2?
Waa qalabka baaritaanka ee IgM-IgG la isku daray, waxaa loo isticmaalaa in si tayo leh loogu ogaado IgG iyo IgM-ka unugyada unugyada 'coronavirus' ee ku jira serum-ka aadanaha, plasma ama dhiigga in vitro oo dhan.
3. Miyaan sameeyaa baaritaanka SARS-CoV-2?
Waxaa loo isticmaali karaa baaritaanka degdegga ah ee sidayaasha fayraska ee astaamaha ama asymptomatic ah.
4. Sidee ayey u dhakhso badan tahay baaritaanka Sinocare ee SARS-CoV-2?
Kaliya wuxuu ubaahan yahay 15-20 daqiiqo.
5. Maxay natiijooyinka ii sheegaysaa?
(1) Natiijada xun: Haddii kaliya ay soo ifbaxdo xariiqda kontoroolka tayada (C) oo khadadka ogaanshaha aan la arki karin, markaa majiro antibody cusub oo loo yaqaan 'coronavirus antibody' oo natiijadu waa mid xun.
(2) Natiijo Wanaagsan: Laba sadar oo casaan ah ayaa soo muuqda. Hal xariiq waa inuu kuyaala aaga kontoroolka (C) iyo xarriiq kale waa inuu kuyaala aaga tijaabada (T) wuxuu muujinayaa in natiijadu ay ufiican tahay IgG iyo IgM antibodies.
(3) Aan ansax ahayn: Qadka kontoroolka ayaa soo bixi waayey (Fiiri sawirka 2aad). Natiijada baaritaanka waa mid aan ansax ahayn.
6. Haddii aan wax badan u baahanahay, ma dabooli kartaa baahideyda?
Haa, waan balaarin karnaa wax soosaarkayaga baaxada leh si aan ula kulanno dalabaadkaaga, fadlan horay u sii xaqiiji amarkaaga oo waqtigeena wareejinta waa ilaa 1 toddobaad.
SARS-CoV-2 Xarigga Tijaabada Qofka (Kolloidol Dahab Habka)
1 dhibic (10μl) ee dhiiga oo dhan / serum / plasma
25 strips / sanduuq; 5 strips / sanduuq
Ku keydi 4℃~ 30℃ ku dheji foornada, ka dheerow iftiinka tooska ah ee qorraxda, qoyaanka iyo kuleylka. Ha qaboojin.